Miyay tahay inaad suuq geyso ereyada muhiimka ah ee aan lahayn mug raadis? | Martech Zone
Miyay tahay inaad suuq geyso ereyada muhiimka ah ee aan lahayn mug raadis?
Isniin, Disembar 10, 2012 Isniin, Disembar 10, 2012 Douglas Karr
Erayo-fure waa luuqada guud ee udhaxeysa rajadaada, websaydhkaaga iyo natiijooyinka mashiinka raadinta ee lagaa helay. Waxay muhiim u yihiin dariiqa ay u leeyihiin iyo awooda ay u leeyihiin inay beddelaan Goobta sida Martech, ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa muhiim u noqon kara waditaanka booqashooyinka. Laakiin taasi waa sababta oo ah booqashooyinka iyo caannimada guud ayaa ah hadafka balooggan.
Ganacsigaaga, booqashooyinka waa inaysan noqon tilmaamaha waxqabadka aasaasiga ah ee bartaada, waa inay ahaato mid aad isbeddelka. Marar badan, ereyada muhiimka ah ee beddelaya way ka duwan yihiin kuwa baabuurta kaxeeya. Falanqeyn ay sameeyeen shirkado badan oo iswaafajinaya ayaa lagu ogaaday in, halka darajo aad u sareysa oo ku saabsan mugga raadinta sare, erayga hal eraygu uu wadi karo kumanaan booqasho… a dhaadheer jumlada 3 ilaa 4 erey ayaa wadin karta badalaad badan.
Ka warran ereyada muhiimka ah ee aan lahayn mug raadis? Kahor intaanan ka jawaabin taas, waa inaan sheegno taas mug raadis ma leh sida ay soo werisay Google. Xaqiiqdii eray kasta oo muhiim ah ama weedh kasta waxay leedahay nooc mug ah… xitaa haddii ay tahay kaliya waxoogaa baaritaan ah bil kasta.
Mid ka mid ah macaamiisheennu waa Xaqa Isdhexgalka - shirkad otomaatig ah oo suuq-geyn ah oo la shaqeysa shirkadaha si aysan u qabsan oo keliya hoggaamiyeyaasha laakiin ay kor ugu qaadaan qiimaha macaamil kasta. Markii ay u sharraxayeen ganacsigooda himilooyinka, weedha suuq geynta nolosha macaamiisha sharaxay si ka fudud wax kasta oo kale oo ka mid ah warshadaha. In kasta oo ay ahayd weedh kaamil ah ganacsigooda, suuq-geynta nolosha macaamiisha ma lahayn mug raadis markii aan bilownay inaan la shaqeyno iyaga sanad ka hor.
Kumaannaan talin Xaqa In la joojiyo suuqgeynta ereygaas muhiimka ah, in kastoo. Waxay ahayd weedh ku filan oo ku kalifaysa inay ku habboon tahay astaantooda oo ay noqon karto erey si ballaadhan loo qaatay mustaqbalka. Taasi waa waxa dhacay. Suuq geynta nolosha macaamiisha waa eray ku sii kordhaya caan ahaanta iyo mugga raadinta. Hadda waxaa jira in kabadan 30 baaritaan bishiiba muddadaas. Oo maleynayaa yaa u safan?
Ha ku xaddidin wadahadalka bartaada kaliya ereyada muhiimka ah iyo weedhaha leh mugga raadinta ugu badan! Adeegso weedh kasta oo ah la xiriira meheraddaada, xitaa haddii ay waddo booqasho keliya! Suurtagalnimada in erayga muhiimka ah ama weedhu ay waddo beddelaad ay ku sii kordhayso ku xirnaanteeda… maahan mugga. Waxa ugu fiican oo dhan, haddii mugga raadintu hooseeyo probably waxaa laga yaabaa inaadan u tartameynin inta badan taraafikadaas!
Tags: mugga keywordkeywordsmidigsaxda ah is-dhexgalka
Isugeynta Istaatistikadu Way Kuu Khaldami Karaan
Hoos u dhaca Wargeysyada
19, 2012 at 6: 19 AM
Waxaa jira talooyin badan oo kaladuwan oo ku saabsan ereyada muhiimka ah. Iyo muran, sidoo kale. Aniga ahaan sababta weedho-dabada-dheer ay u waddo isbeddello badan maxaa yeelay markaad qorto raadinta gaarka ah, waxaad horay u gaadhay go'aanka ah inaad iibsato.